ဂီနီအစိုးရသည်အလူမီနီယံကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်မူဘောင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည် (chalco) ၏ခေါင်းပုံဖြတ်အပေါ် 131 bauxite သတ္တုရိုင်း | YK လူမီနီယမ်
ဂီနီအစိုးရသည်အလူမီနီယံကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်မူဘောင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည် (chalco) ၏ခေါင်းပုံဖြတ်အပေါ် 131 bauxite သတ္တုရိုင်း
ဂီနီအစိုးရနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏လူမီနီယံကော်ပိုရေးရှင်း (chinalco) အောက်တိုဘာလတွင်ဘေဂျင်း၌မူဘောင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် 31 ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စာချုပ်ရန် 131 bokai အတွက် bauxite သတ္တုတွင်း, ဂီနီ, အစိုးရက၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်.
မူဘောင်သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ, chinalco သည်တစ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုတစ်ခုပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားသည် 131 လာမယ့်ခြောက်လအတွင်းမှာ buxite စီမံကိန်း.
သဘောတူညီချက်၌တည်၏, နှစ်ဖက်စလုံးကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်သူတို့၏ခိုင်မာသောရည်ရွယ်ချက်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် 131 bauxite စီမံကိန်းကို.
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဤသမိုင်းဝင်အခမ်းအနားကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့သည်. Guinea ၏ဘူမိဗေဒနှင့်တွင်းထွက်သယံဇာတ ၀ န်ကြီး magassouba နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏ aluminium ကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကchairman္ဌ ge ge honglin တို့သည်သဘောတူညီချက်အားဂီနီနှင့်တရုတ်ကိုယ်စားအသီးသီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။.
ဇန်နဝါရီ 04, 2021 မှာ 4:47 ည
Aԝesome things here. I am very happy to look your article.
Thanks а lot ɑnd I’m havingalook ahead to touch you. Will уou kindly
My web-site menelaus
ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2021 မှာ 9:11 နံနက်
ဖေဖော်ဝါရီ 14, 2021 မှာ 11:04 နံနက်
မတ် 05, 2021 မှာ 11:44 နံနက်
မင်္ဂလာပါ 30 မီလီဂရမ် tadalafil တက်ဘလက်
မတ် 08, 2021 မှာ 1:23 ည
ယေဘုယျဆေးပြား ဆရာဝန်တစ် ဦး ၏ဆေးညွှန်းမပါဘဲဆေးဝါးများ
မတ် 09, 2021 မှာ 1:51 ည
မပါဘဲအွန်လိုင်းဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဝယ်ကြလော့ ed များအတွက်ယေဘုယျဆေးပြား
မတ် 11, 2021 မှာ 2:24 ည
အွန်လိုင်း Viagra ဝယ်ယူ Viagra ၏ကုန်ကျစရိတ်
မတ် 12, 2021 မှာ 1:08 ည
Viagra ကုန်ကျစရိတ် 100မီလီဂရမ် Viagra
မတ် 13, 2021 မှာ 11:27 နံနက်
ယေဘုယျ 100mg Viagra ကိုဝယ်ကြလော့ အွန်လိုင်း usa Viagra
အွန်လိုင်း Viagra အမိန့်
မတ် 14, 2021 မှာ 9:35 နံနက်
ယေဘူယျ Viagra ကိုအွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာ Viagra စျေးနှုန်း
မတ် 15, 2021 မှာ 7:30 နံနက်
အွန်လိုင်းအစစ်အမှန် Viagra ဝယ်ပါ ကောင်တာ Viagra ကျော်အကောင်းဆုံး
ယေဘုယျ 100mg Viagra ကိုဝယ်ကြလော့
မတ် 16, 2021 မှာ 6:56 နံနက်
Viagra အွန်လိုင်း usa ဝယ်ပါ ကောင်တာကျော် Viagra
မတ် 16, 2021 မှာ 1:42 ည
chloroquine for sale chloroquine ဖော့စဖိတ်ကိုဝယ်ကြလော့
မင်းဖြစ်ရမယ် logged in လုပ်သည် မှတ်ချက်တစ်ခုတင်ရန်.